Archive du 20170607
Ambohimanambola Nirehitra ny Jirama
Nirehitra ny toby famokarana herinaratra eny Ambohimanambola, tao amin’ny “cellule disjoncteur” an’ny orinasa Aggreko omaly maraina tokony ho tamin’ny 7 ora sy fahefany.
Manantsoa Victor Mbola maro ny “Claudine” eto Madagasikara
Tsy i Claudine A&C ihany no Claudine eto Madagasikara fa mbola maro, hoy i Manantsoa Victor tamin’ny mpanao gazety.
Fanovana ny lalàmpanorenana Takian’ny ankamaroan’ny mpanao politika
Ny filoham-pirenena sisa andrasana, hoy ny mpanao politika miara-dia amin’ny filoha teo aloha Zafy Albert,
Lany rora fotsiny !
Miarahaba ry Jean sy ry Jeanne a ! Efa volana vitsivitsy izay no nahenoanay anareo mimenomenona sy mivazavaza lava izao fa tsy maintsy hampanjakaina eto amin’ity
Seraseran’ny samy kandida Hanjakan-dRavalomanana
Efa 13 taona izao no nisian’ny tambajotran-tserasera “facebook”, noforonin’ilay teratany Amerikanina Mark Zuckerberg, izay mitana ny laharana faha-5 amin’ireo mpanefoefo amin’ny vola dolara amin’izao fotoana.
Raharaha Alain Ramaroson Nahemotra indray ny fitsarana
Nahemotra ho amin’ny 20 jona izao indray ny fitsarana an’i Alain Ramaroson izay niakatra teny amin’ny fitsarana Anosy omaly.
Randrianasolo Nicolas Mila hafindra toerana ny « Chef de groupement » any Betroka
Mila voatsiary amin’ny fiampangana ny foko zafindravala any an-toerana ho mpangalatra izay tena fampiadiana foko, ny “chef de groupement” an’ny zandary any Betroka, hoy ny depiote Randrianasolo Jean Nicolas.
Tontolon’ny fitsarana Hitokona ny mpiraki-draharaha
Tohin’ilay fanambarana mikasika ny amin’ny tsy tokony hanaovana tsinontsinona ireo mpiraki-draharaha manatanteraka ny asany sy ny tsy fanekena ny fitsabahana amin’izany
Fetin’ny Pentekosta Nihena ireo olona namoy ny ainy sy naratra
Olona sivy no namoy ny ainy nandritra ny fetin’ny pentekosta lasa teo manerana ny nosy ka 2 tao amin’ny HJRA, raha ny vaovao azo tetsy amin’ny hopitaly HJRA.
Hitohy ny fahamaizinana ?
Dia tsy mbola ho fanta-bahoaka ihany izay namono an-dRatsimandrava, tsy hazava ny mikasika ny raharaha
Areti-mifindra eto Madagasikara Nanaovana tomban’ezaka manokana
Nanaovana tomban’ezaka tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina omaly ny momba ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika.
Teknisianina navoaky ny ENAM Rasoloson Hery no “Major des Majors”
Namoaka voalohany ireo teknisianina ambony miisa 174 nanaraka ilay fiofanana mitohy na “Formation continue Cycle Expertise” ny sekoly ambony Enam etsy Androhibe. Rasoloson Hery no Major des majors tamin’izany tao anatin’ny andiany “ Mamiratra”.
Praiminisitra tany Tsihombe Voaresaka indray ny dahalo miova fo
Tonga nidina ifotony tany Tsihombe Faritra Androy, ny zoma 2 jona teo, nitokana ny tranon’ny tanora any an-toerana sady nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fanatanterahana ny lohahevitra
Miketrika mafy ny hisian’ny fiarahana mametraka rafitra vaovao hiarahana amin’ny antoko politika samy hafa ny DFP « dinika ho fanavotam-pirenena » amin’izao fotoana izao. Ny hisian’ny rafitra tetezamita hiarahana mitondra mialohan’ny fifidianana izay ho atao eto no tena tanjon’izy ireo amin’izany.